नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : साहित्यकार अम्बिका गुरुङ अब स्थापित गीतकार पनि बन्दै ! वहाँका केही गीतहरु यस्ता छन :
साहित्यकार अम्बिका गुरुङ अब स्थापित गीतकार पनि बन्दै ! वहाँका केही गीतहरु यस्ता छन :
अम्बिका गुरुङ जति सौम्य, भद्र, समाजसेबी भावनाकी धनी र मिलनसार हुन्हुन्छ मान्छे जस्तै उस्तैछन वहाँका गीतहरु पनि । थुप्रै कविता लेखेकी गुरुङ अन्तरराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज वाशिङटन डिसी मेट्रो कमिटिको कार्य समितिमा पनि हुनुहुन्छ । साहित्यकार गुरुङ अब स्थापित गीतकार पनि बन्दै हुनुहुन्छ वहाँ केही गीतहरु यस्ता छन :
वहाँको You Tube लिँकमा क्लिक गर्नुस् र हेर्नुस् अरु भिडियोहरु पनि ।
गुरुङ परिवार तस्वीरहरुमा
नेपाल मदर डट कम परिवार साहित्यकार एबम गीतकार अम्बिका गुरुङको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना र हालसम्म प्रकाशित कविता, गीत, पुस्तक सहितका कृतिका लागि वहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ ।